Security Council press statement on Myanmar | United Nations in Myanmar
The Members of the Security Council reiterated their full support for ASEAN’s positive and constructive role in facilitatingapeaceful solution in the interest of the people of Myanmar and their livelihoods. The Members of the Security Council reiterated their calls for the swift and full implementation of ASEAN’s Five Point Consensus. They underlined their support for the ASEAN Special Envoy and looked forward to his visit to Myanmar at the earliest opportunity to meet with all parties concerned and carry out mediation that facilitates the dialogue process and the provision of humanitarian assistance by ASEAN. They encouraged complementarity between the UN Special Envoy and ASEAN efforts.
The Members of the Security Council again expressed concern that recent developments pose particular serious challenges for the voluntary, safe, dignified, and sustainable return of Rohingya refugees and internally displaced persons.
The Members of the Security Council recalling their Press Statement SC/14430 of4February 2021 and Presidential Statement S/PRST/2021/5 of 10 March, reiterated their deep concern at developments in Myanmar following the declaration of the state of emergency imposed on 1 February and their call on the military to exercise utmost restraint. They encouraged the pursuance of dialogue and reconciliation in accordance with the will and interests of the people of Myanmar.
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ သည့် အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် များစွာ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ အကြမ်းဖက်မှုများအား ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် အရပ်သားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများအား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့် အဆီးအတားတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ သာတူညီမျှ ထိုးနှံပေးနိုင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပါအဝင် မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်း မွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက အလေးထား ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်နေသူများအားလုံးအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ အား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့် အဆီးအတားတစ်စုံတစ်ရာမရှိ အပြည့်အဝ ပေးအပ်ခွင့်ပြုရန်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သူများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများကို ပြည်သူအားလုံး လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်အောင် ဆောင် ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားထားပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိနိုင် ရန်နှင့် အမြန်ဆုံးထိုးနှံပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမှ ယခုထက်ပို၍ ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်းပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းများအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာနိုင်ရေးတွင် ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်သည့် အာဆီယံ၏ အပြု သဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုံခြုံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက အာဆီယံ၏ အချက်ငါးချက်ပါ ဘုံသဘောတူညီ ချက်ကို အမြန်ဆုံးနှင့် အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းပါသည်။ ၎င်းတို့က အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အား ထောက်ခံအားပေးကြောင်းနှင့် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ် စတင်နိုင်ရေးနှင့် အာဆီယံမှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပေးအပ်နိုင်ရေး အတွက် ကြားဝင်စေ့စပ်ဖျန်ဖြေပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အာဆီယံကြား တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် အားဖြည့်ကူညီ၍ ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။
မကြာမီက ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများသည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်ရသူများ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော နည်းလမ်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအလျှောက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အထူးကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာပြည်သူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှု၊ နိုင်ငံရေး သီးခြားလွတ်လပ်မှု၊ ပိုင်နက်နယ်မြေ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးတို့အတွက် ရပ်တည်ပံ့ပိုးပေးပါမည်ဟူသည့် ခိုင်မာ သည့် သန္နိဋ္ဌာန်အား ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များက ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် SC/14430 နှင့် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် S/PRST/ 2021/5 တို့အား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းကာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြပြီး စစ်တပ်ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန် ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းထားပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည် အခြေအနေကို အနီးကပ် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြားထားပါသည်။